Abenzi beMonocrystalline | I-China Monocrystalline Factory
Iphaneli YAMI YAMI SOLAR Mono Solar PV 305w 310watt 315wp 320 Watt 325 w Perc Solar Pv Module
EZIPHUMA EZISEMQOKA 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwepheshe obusha ukwenza ngcono ukusebenza kwamamojula, inikeze ukubukeka okuhle kobuhle, ikwenze kube lula ukufakwa kophahla. Ukusebenza okuphezulu Ukusebenza kahle kwemodyuli ephezulu (kufika ku-19.98%) kusizakala kubuchwepheshe bePassivated Emmiter Rear Contact (PERC). I-PID Resistance Excellent Anti-PID yokusebenza isiqinisekiso sokuncipha kokuncipha kwamandla okukhiqiza ngobuningi. Ukusebenza okuphansi kokukhanya Ingilazi ethuthukile nombhalo weseli ...
Iphaneli yami ye-SOLAR M2 Mono Solar PV 365w 370watt 375wp 380 Watt 385 w Perc Solar Pv Module
EZIPHUMA EZISEMQOKA 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwepheshe obusha ukwenza ngcono ukusebenza kwamamojula, inikeze ukubukeka okuhle kobuhle, ikwenze kube lula ukufakwa kophahla. Ukusebenza okuphezulu Ukusebenza kahle kwemodyuli ephezulu (kufika ku-19.84%) kusizakala kubuchwepheshe bePassivated Emmiter Rear Contact (PERC). I-PID Resistance Excellent Anti-PID yokusebenza isiqinisekiso sokuncipha kokuncipha kwamandla okukhiqiza ngobuningi. PID Ukumelana Excellent Anti-PID ukusebenza isiqinisekiso li ...
Iphaneli yami ye-SOLAR M3 Mono Solar PV Panel 185w 190watt 195wp 200 Watt 205 w Perc Solar Pv Module
EZIPHUMA EZISEMQOKA 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwepheshe obusha ukwenza ngcono ukusebenza kwamamojula, inikeze ukubukeka okuhle kobuhle, ikwenze kube lula ukufakwa kophahla. Ukusebenza okuphezulu Ukusebenza kahle kwemodyuli ephezulu (kufika ku-20.3%) kusizakala kubuchwepheshe bePassivated Emmiter Rear Contact (PERC). I-PID Resistance Excellent Anti-PID yokusebenza isiqinisekiso sokuncipha kokuncipha kwamandla okukhiqiza ngobuningi. Ukusebenza okuphansi kokukhanya Ingilazi ethuthukile kanye ne-cell surface textu ...
Iphaneli yami ye-SOLAR M3 Mono Solar PV 245w 250watt 255wp 260 Watt 265 w Perc Solar Pv Module
EZIPHUMA EZISEMQOKA 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwepheshe obusha ukwenza ngcono ukusebenza kwamamojula, inikeze ukubukeka okuhle kobuhle, ikwenze kube lula ukufakwa kophahla. Ukusebenza kahle kwe-module ephezulu yokuguqula ukusebenza (kuze kufike ku-19.8%) kusizakala kubuchwepheshe bePassivated Emmiter Rear Contact (PERC). I-PID Resistance Excellent Anti-PID yokusebenza isiqinisekiso sokuncipha kokuncipha kwamandla okukhiqiza ngobuningi. Ukusebenza okuphansi kokukhanya Ingilazi ethuthukile kanye ne-cell surface textu ...
I-MY SOLAR M3 Mono Solar PV Panel 315w 320watt 325wp 330 Watt 335 w Perc Solar Pv Module
EZIPHUMA EZISEMQOKA 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwepheshe obusha ukwenza ngcono ukusebenza kwamamojula, inikeze ukubukeka okuhle kobuhle, ikwenze kube lula ukufakwa kophahla. Ukusebenza okuphezulu Ukusebenza kahle kwemodyuli ephezulu (kufika ku-20.08%) kusizakala kubuchwepheshe bePassivated Emmiter Rear Contact (PERC). I-PID Resistance Excellent Anti-PID yokusebenza isiqinisekiso sokuncipha kokuncipha kwamandla okukhiqiza ngobuningi. Ukusebenza okuphansi kokukhanya Ingilazi ethuthukile nombhalo weseli ...
Iphaneli yami ye-SOLAR M3 Mono Solar PV Panel 380w 385watt 390wp 395 Watt 400 w Perc Solar Pv Module
EZIPHUMA EZISEMQOKA 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell isebenzisa ubuchwepheshe obusha ukwenza ngcono ukusebenza kwamamojula, inikeze ukubukeka okuhle kobuhle, ikwenze kube lula ukufakwa kophahla. Ukusebenza okuphezulu Ukusebenza kahle kwemodyuli ephezulu (kufika ku-20.17%) kusizakala kubuchwepheshe bePassivated Emmiter Rear Contact (PERC). I-PID Resistance Excellent Anti-PID yokusebenza isiqinisekiso sokuncipha kokuncipha kwamandla okukhiqiza ngobuningi. Ukusebenza okuphansi kokukhanya Ingilazi ethuthukile kanye ne-surface texturin ...